PinePhone: Linux smartphone inomhanya KDE Plasma | Linux Vakapindwa muropa
PinePhone: yeLinux smartphone inomhanya KDE Plasma
Pine64, timu iri kuseri kwePinebook yakazivisa kuti ichatanga basa pane yakachipa yeLinux-based smartphone.
Akatumidzwa zita remadunhurirwa iyo PinePhone, iyo foni ichavakwa yakatenderedza imwe yeako Pine64 zvisikwa, ivo vachatora hwaro hwePine A64 imwechete bhodhi komputa kutanga maitiro ekugadzira, kugadzira uye kuvaka iyo PinePhone.
Chokwadi vamwe venyu vanorangarira Pine64, nekuti izvi ndiye mugadziri uye mutengesi kuseri kwePinebook , yakaderera-mutengo Linux-based laptop.
Iyo kambani inoronga kuwedzera misika yayo munyika yepasi-yakachipa Linux nhare mbozha, inoshanda pa smartphone, inonzi iyo PinePhone.
Kufanana nemalaptop anodhura Pine anotengesa, iyo PinePhone ingangodaro isiri iyo chaiyo monster.
Zvinoenderana nechikwata chePine, vanoronga kumisikidza iyo PinePhone yakatenderedza yavo Pine A64 komputa modhi.
Dhizaini haisati yapedzwa, asi Pine64 yakaronga kuburitsa mamwe dev kits Vachavhura munaNovember 1 vaine zuva rekufungidzira rekushandisa pakati pa2019.
1 Musika weLinux smartphones watanga
2 Chii chinonzi Kit chine?
2.1 PinePhone ichawanikwa riini?
Musika weLinux smartphones watanga
Mushure mekusiiwa kweUbuntu Runhare, Purism Librem 5 inoita senge ichave mukwikwidzi anotevera weLinux smartphones ikozvino.
Kuchena kwave kutobatana nemazita makuru seGNOME uye KDE, uye isu tinogona kutarisira kuti mudziyo utange kutumira muna Kubvumbi 2019.
Asi sezvakataurwa pakutanga kwechinyorwa zvakaratidza kuti mumwe mutengesi wehardware ari kutsvaga kugadzira yake yeLinux smartphone uye kuisa iyi markup.
KDE Neon musiki Jonathan Riddell akazivisa izvi pa Open Source Summit, Europe Edition.
Pakubata Pine64 muvambi TL Lim, zvakawanikwa kuti michina inonzi PinePhone uye PineTab.
Kutanga November 1, Pine64 ichatanga kutumira yekutanga PinePhone Dev Kits kusarudza vagadziri mahara.
Chii chinonzi Kit chine?
Yekutanga PinePhone se ichaendeswa kune vakasarudzwa vanogadzira mahara munaNovember 1.
Este Iyo yekubatanidza kit ye ​​PINE A64 socket + SOPine module + 7, touch screen + Kamera + Wifi / BT + Playbox bhokisi + Lithium ion bhatiri kesi + LTE katsi 4 USB dongle.
Aya ma combo kits anotendera vagadziri kusvetukira mukati uye kutanga PinePhone kuvandudza.
Iyo PINE A64 chikuva yatove neiyo hombe vhezheni yeLinux inoshanda sisitimu nekuda kwePINE64 Nharaunda uye KDE neon rutsigiro.
Iyo PinePhone Developer Bhodhi Yese-mu-Imwe ine 1440 ″ Panel 720 × 5,45 ichaburitswa pamberi peFOSDEM uye zvinangwa zveiyo demo kuFOSDEM.
Zviripachena, zvichave zvichinyanya kuomarara kubata pane smartphone, asi zvinofanirwa kubvumira vanogadzira kuti vatange kushambadza chikuva kugadzirira kunyorera kwePinePhone, sekureba kwazvinotumira.
Uku hakungambove kwekutanga kuedza kuvaka foni yeLinux.
Muchokwadi, Android parizvino inoshandisa iyo Linux kernel, saka kune mabhiriyoni emafoni anomhanya Linux izvozvi.
Asi mafoni anoshandisa iwo mamwe marudzi eetekinoroji sedesktop Linux akajairika.
PinePhone ichawanikwa riini?
Iyo chaiyo dhizaini yefoni yakatotanga, asi haizopedziswa kusvika Q2019 XNUMX mushure mekugamuchira chiyero kubva kune yekuvandudza bhodhi uye icharamba ichitarisa kufambira mberi kwesoftware yakavhurika.
Lim akati ivo vari kushandisa iyi nhanho-nhanho nzira yekudzivirira kumwe kuparara kweLinux foni. Iyo PinePhone inoparadzanisa iyo SoC uye LTE module nekuda kwemakona makuru emitsara uye kunetsekana kweGPL.
Mutengo unotarisirwa unofanirwa kunge uri mu $ 100 + renji yeiyo 2GB RAM uye 16GB yekumisikidza yekugadzirisa.
Zvinoenderana nechirongwa chiripo, iyo chaiyo PinePhone dhizaini nePlasma Mobile tekinoroji haigadziriswe kusvika 2019 Q2.
Sezvo Pine64 ichizivikanwa nemalaptop ayo asingadhuri, PinePhone haizotyora musana wako kana zvasvika pamutengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » PinePhone: yeLinux smartphone inomhanya KDE Plasma
Ndingawedzera kuti zvinoita kunge zvisinganzwisisike kwandiri kuti iri ndiro rekupedzisira bhodhi rekusimudzira kana zvanyanya zvishoma, pamitengo yefoni, ivo vane bhodhi yakavakirwa paRK 3399 yakaenzana neiyo Snapdragon 650 MSM8956 iyo yatotadza kusvika nguva painobuda uye inodarika zvakapetwa kaviri kupfuura iyo.
ROCKPro64 2GB Imwe Bhodhi Komputa Mutengo: $ 59.99 vs.
ROCKPro64 4GB Imwe Bhodhi Komputa Mutengo: $ 79.99 vs.
PINE A64 + 2GB BOARD Mutengo: $ 29.00 uye
7, LCD TOUCH SCREEN PANEL Mutengo: $ 35.99
Uye zvakare inobvumidza kushandiswa kweM2 nerambi remadziro
ROCKPro64 PCI-e X4 kusvika M.2 / NGFF NVMe SSD Yekufambidzana Kadhi Mutengo: $ 5.99
Kuti kana yakashandisirwa foni - kunyangwe dai yaive yakakora - kuisa 2 M2s, zvaizoita kuti vagare nekusingaperi kuburikidza nekuvandudzwa kwescreen, ndiro neM2ses
Kunyangwe ivo vangangotanga kuda kushanda neinodhura imwe.
José Luis akadaro
Mafoni akafa kare asati aenda, nekuti sebremrem ndinofungidzira kuti harizotakura WhatsApp tingaida kana kwete, pasina WhatsApp imari uye nguva inopambadzwa Imwe nhare yeLinux inogona kushandisa WhatsApp ingave iri chaiyo yekupfuura
Pindura José Luis
Jose Luis anopindura akadaro
Jose Luis, iwe wakafanana neruzhinji rwevanhu, a borr @ g @ ... iwe unoshandisa güasap kuponesa mashoma eur @ s ... zvakadaro, zvimwe zvakafanana, zvakaparadza bongo ... rarama nekukurumidza ... svetuka traffic mwenje, kana iwe uchizivikanwa ... Rimwe zuva iwe unomira kuti ufunge, kana iwe unomira nekuda kwekumhanya kwako uye nehupenyu hwakareruka;)
Pindura kuna jose luis pindura
Kuwanikwa kweMicrosoft yeGitHub ikozvino kuri pamutemo
ESET: yega hurukuro yeLinuxAdictos